:: My Little World ::: တွေ့ ကြုံလေသမျှ.....
Posted by Nay Nay Naing at 7/23/2010 03:13:00 PM
သိချင်နေတာ...။ရှေ့နှစ်မှာ ၃နှစ်ပြည်.၊သက်တမ်းကုန်ပြီလေ ။ စိတ်အတော်ပျက်/ စိတ်အတော်ကုန်ပါတယ်။
သံရုံးတစ်ယောက်သွားတိုင်း story တစ်ပုဒ်ကြားရတာ်။ E-passport ပြောင်းပိးရင် အိုင်စီအေမှာပြောင်းရတာတွေ မသိသေးလို့ အခုမှ သိရတယ်။
ကြားခဲ့တာတွေလဲရေးပါလားဟင် blog မှာ ရေးရင် blog မှာမုန့်ကျွေးပါ့မယ် =)
Friday, July 23, 2010 5:41:00 PM
ဖတ်ပြီး စိတ်ကုန် စိတ်မော စိတ်ပင်ပန်းထှာ
Friday, July 23, 2010 9:53:00 PM
one of the scariest and troublesome moment once inathree year..and total nitemare as well
Friday, July 23, 2010 11:11:00 PM
ကျောင်းတုန်းက တစ်နှစ်မှာ roll call ကို finger print နဲ့ ယူမယ်ဆိုပြီး စတန့်ထွင်လိုက်သေးတာ သတိရမိတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း တစ်ယောက်တည်း လက်ဗွေနှိပ်လို့ မရ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ လက်ဗွေကို ဘယ်လိုမှ ဖမ်းလို့မရဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်ရတယ်။ နောက်ဆုံး မရတဲ့အဆုံး လက်လျှော့လိုက်ရရော။ နောက်တော့ roll call လည်း အဲဒီနည်းနဲ့ မယူဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီမှာ card အတွက် လက်ဗွေနှိပ်ရတုန်းကတောင် အဲလိုများ ထပ်ဖြစ်နေဦးမလားဆို လန့်နေမိသေးတယ်။
ဒါမျိုး ကြုံဖူးထားတော့ မနေ ရေးတာဖတ်ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ အဲလိုဖြစ်နေရင် ဒုက္ခလို့ တွေးမိတယ်။ :'(
နောင်ဘဝလည်း ဒီအချိုးအတိုင်းပဲ ဆိုလို့ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူပြန် မဖြစ်ပါရစေနဲ့တော့ တော့ တော့...
Saturday, July 24, 2010 12:15:00 AM
ဖတ်ရတာနဲ့တင် ထပ်တူထပ်မျှမောမိပါတယ် ။ ဟိုးအထပ်မြင့်ကြီးက တန်ဖိုးကြီးနာမည်နဲ့ဆိုင်ကြီးက အရင်စနစ်တုန်းကတော့ မြန်ပါတယ်၊ ဈေး လဲမှန်ပါတယ်။ ခုစနစ်ကျတော့ ဘယ်လိုလဲ မသိဘူး ။ ကိုယ့်ဆီမှာလာအပ်အပ် မအပ်အပ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေသင့်တာပေါ့ ။ အသိတယောက်ခမျာတော့ ကျောင်းပိတ်တုန်း ရန်ကုန်ခဏပြန်ဖို့ အောက် ၅ထပ်အတွင်းက ဆိုင်တဆိုင်မှာ သက်တမ်းတိုးတာမှာ data တွေမှားမှတ်လိုက်တဲ့အတွက် မပြန်ဖြစ်လိုက်ဘူး ။ သူကတော့ ပေါက်ကွဲလိုက်တာ အရမ်းပဲ.. :-|
သေချာတိတိကျကျကို ကိုယ်တွေ့ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မနေနေ ။
Saturday, July 24, 2010 1:01:00 AM
မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဟောင်းကြီးတခုပါပဲ... ဟင်း...
အခွန်သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများဆို မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ် ပြောပြပါ :D
Saturday, July 24, 2010 9:45:00 AM
၁. အတော်ခံစားလာရတဲ့ပုံဘဲ ချရေးထားတယ် ဆိုတော့
မနေ့က လာဖတ်သေးတယ် တယ်လီဖုံးနဲ့
တို့တယ်လီဖုံးမှာ လေးဒေါင့်တွေ ဘဲပေါါ်ိုလို့ဖတ်လို့မရလို့လက်လျော့ပြန်သွားတာ အခုမှ လာဖတ်ရပါတယ်။ အရှည်ကြီး စိတ်ရှည်လက်၇ှည်ရေးထားတာရယ်ရေးရဲတာရယ်. ကျေးဇူးပါ။ တို့တွေ က လူမုန်းမခံတတ်ဘူး ။ ကြောက်လဲကြောက်တတ်တယ်။ ပညာရှိဆိုောတ့အမြဲစိတ်ထဲကနဲ့လလက်ထဲကနဲ့တထပ်ထည်းမဖြစ်ဘူး။
၂။ အိတ်ပြားချပ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး ဘဏ်ကပ်ထဲမှာ zero balance ပြသွားတာပါ။
၃။ အဲဒီဆိုင် က အစ်မ သွားမေးတုံးက 70 ဆိုလား၈၀ ဆိုလား. ပါတဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါတယ်။ အရင်တုံးကလည်းဆက်ဆံဘူးပါတယ် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဆိုင်ကြီးဆိုတော့လဲစိတ်ချရတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်သွားစုံစမ်းတောလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါတယ်။ စာအုပ်ကုန်ဘို့သက်တန်းခြောက်လ အောက်ရောက်နေလို့ ရန်ကုန်ပြန်လို့မရဘူးထင်လို့သွားစုံစမ်းတာ သေချာရှင်းပြပါတယ်။ အဝင်ကနေ ရေရင် တတိယမြောက်ကောင်မလေးပါ.။ ပနဲ့ဒုကတော့သိတ်သိပုံမရဘူး စကားလဲသိတ်မပြောဘူး. တတိယတစ်ယောက်က ပိုပြီး knowledge ရှိပုံရတယ်။ ပပိုပြီးတော့လဲဖော်ရွေတယ်။ ပြန်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း.
။သူတို့ကိုနဲ့တင်အားမရလို့ စင်မြန်မာသွားမေးလိုက်သေးတယ်။ ခြောက်လအောက်ရန်ကုန်ပြန်မရဘူး ပြန်ဝင်လာလို့မရဘူးလို့ကောလဟာလဖြစ်နေလို့.. တစ်ကယ်တန်းပြန်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခြားနိုင်းငံသာသွားလို့မရတာ. ကိုယ့်နိုင်ငံကိုတော့ပြန်လို့ရပါတယ်တဲ့ စလုံးပြန်ဝင်လာလို့မရဘူးဆိုတာကောဟုတ်သလားဆိုတော့ပြန်ဝင်လာလို့ရပါတယ်တဲ့။ social visit သာပြသာနာဖြစတာပါတဲ့ဒီမှာ status တစ်ခုရှိတဲ့သူဆိုရင် ပြန်ဝင်လာလို့ရပါတယ်ဆိုလို့ ရဲရဲကြီး ရန်ကုန်ပြန်သွားတာ.ရန်ကုန်လဲဝင်လို့ရပါတယ်။ စလုံးကို ပြန်ဝင်လာလို့လဲရပါတယ်။ အဲဒီတော့အဲဒီအချိန်မှာ တစ်ခုခု မှားယွင်းသွားတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ။်
တို့တွေ တုံးကလည်းမှားဘူးတယ် အဲဒီတုံးက အလုပ်မလုပ်သေးဘူး အလုပ်မလုပ်ကြောင်းထောက်ခံစားသွားယူတာ ခင့်ပွန်းဖြစ်သူကို မှီခု နေထိုင် အလုပ်မလုပ်ကြောင်းရေးပေးရမှာ ဖခင်ဖြစ်သူကို မှီခိုနေထိုင်ဆိုလို့ပြန်ပြင်ရတယ။်
နောက်တစ်ခါ. အခွန်ဆောင်တာ လ..မှားပြန်တယ။် ဥပမာ. ဇွန်လ အထိဆောင်ပြီးပါပြီဆိုတာ ဧပြီထိဆောင်ပြီးကြောင်းလို့ရေးတယ။် အဲဒါနဲ့ ပြန်ပြောတော့အဲဒါလေးကိုချစ်ပြီး ပြင်ရေးပေးလိုက်တယ။် တို့တွေ က မကျေနပ်ဘူး အဲသလိုခြစ်ပြီ်းပြင်ရင် တို့တွေ ကခြစ်ပြီးအတုလုပ်သလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ လို့ပြနပြောတော့အဲဒီပြင်ရာဘေးကလေးမှာ သံရုံးတံဆိပ်တုံးပါါပါတယ်တဲ့။ သေချာကြည့်ပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့လဲ ပိုက်ဆံထောင်ချီပေးပြီးရခဲ့တဲ့စာရွက်ကလေးတစ်ရွက် မှာပြင်ရာကလေးတွေ မရှိစေချင်တာတော့အမှန်ဘဲ။ အသစ်ပြန်ရေးဘို့ဘဲခက်ခဲသလား။
တို့တွေ လည်းလက်ဗွေနိပ်ဘူးတာ.. (အမှုဖြစ်ဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူး) ဘယ်လက် မ ကိုနိပ်လို့မရဘူး ကံအားလျော်စာ ညာလက်မ နိပ်လို့ရသွားတယ။် ဟင်း အခုသွားနိပ်ရင် အဆင်ပြေပါ့မလားမသိ။
ဇတ်လမ်းတွေ ကတော့ပြောလို့မကုန်ပါ. လူရှိရင်ဇတ်လမ်းရှိတာဘဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
အခုအဆင့်မြင့်ပါတယ် အင်တာနက်ထဲကနေ ဖောင်တော်တော်များများ ဒေါင်းလုပ်လို့ရတယ် မြန်မာသံရုံးဝက်ဆိုက် ကိုသွားပြီးရင်ဖောင်တွေ ရှိတယ်။ ကြိုဖြည့်သွားလို့ရတာပေါ့။
ပြောမယ်ဆိုမှ ကျွေးမှာ ဒီအတိုင်းတော့အရင်းဆုံးလို့မဖြစ်ဘူး။
ဘာဘဲပြောပြောနေနေ. ဒီမှာလုပ်ရတာ အမှန်တစ်ကယ်တော့ အဆင်ပြေပါတယ် မကျေနပ်ရင် ရန်ကုန်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား ဒီထက်ခက်ခဲမှာပါ။ မှတိမိသေးတယ်မဟုတ်လား ပန်းဆိုးတန်းရုံးကြီးကို မမေ့တတ်သေးရင်..
မနေနေ ပြောတာနဲ့ မီးလဲ သွားမေးကြည့်သေးတယ် မခင်ဦးမေပြောသလိုဘဲ.. မီးကို ကောင်းကောင်းပြန်ဖြေပေးတယ်.. သံရုံးမှာ နည်းစနစ်တွေ ပြောင်းတာကိုလဲ သူတို့ပြန်ဖြေပေးတယ်.. မနေနေ မေးတုန်းကလိုတော့ မဟုတ်ဘူးသိလား.. ဘယ်လိုမေးလဲလဲဟင်... (စပ်စုတာ:P)... တခုခုလွဲနေပုံဘဲ... မနေနေ အပ်ထားတာ ဘယ်မှာလဲဟင်.. အဲဒီမှာက စိတ်ချရလား.. မီးက မသိလို့ နောက်ပြီး မီးက ဒီကို ရောက်တာ မကြာသေးဘူးလေ.. မီးသူငယ်ချင်းတွေပြောတော့ မနေနေပြောတာနဲ့ နည်းနည်းကွာနေတယ်.မီးသူငယ်ချင်းတွေလဲ တခြားနေရာမှာ အပ်ကြတယ် အမျိုးမျိုးဘဲ မနေနေပြောသလိုဘဲ တခြားနေရာမှာလဲ တန်းစီးရတယ်နောက်ပြီးတော့ စာရွက်စာတမ်းလိုတာတွေဘာတွေလဲပြောတယ်.. ဘယ်ဟာက အမှန်လဲဟင်.. မီးကို အကြံပေးပါဦး.. မီးက စိတ်ချရတဲ့ နေရာမှာလုပ်ချင်လို့ပါ.. မီးကိုပြန်ပြောပေးကြပါဦး.. :P
ATM ငွေထုတ်တာက အလီလီခွဲမထုတ်ချင်ရင် ဘဏ်ကို ဖုန်းကြိုဆက်ပြီး ငွေပမာဏကို မြှင့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ POSB/ DBS မှာ တစ်ရက်ကို ၅၀၀၀ ထိ မြှင့်ခိုင်းလို့ရတယ်။
ခု နည်းနည်းပြောင်းနေပြန်ပြီ အစ်မရေ...
ညီမ လုပ်တဲ့ဆိုင်က ၃၅ ပဲ ပေးရတယ် အစ်မ...
Kg Htet Computer, #05-59
Friday, August 06, 2010 4:57:00 PM
Thank you so much Really appreciate that you shared the detailed info. Let me share ur post to my friends who are about to renew passports. I'll include your name & the link as references.
Thursday, August 19, 2010 3:09:00 AM
Everytime i went to myanmar embassy myself and this time I joined to agent. I joined to agent nearly2weeks and i didnt get any contact from them. So i went there one sunday and they close the shop. They advertise their shop open daily....... I dont know what to do ...So I'd like to advise you all if you have time to go to embassy go yourself better and faster...:( :( :(
Sunday, August 22, 2010 8:05:00 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ မှ အားမကိုး ကိုယ့်ဘာသာလုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒါနဲ့သတိထားမိသလောက်ဆို ပင်နီဆူးလားက အဲလို ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးတဲ့ဆိုင်တွေက နေ့ တိုင်း၊ အချိန်မှန် မဖွင့်ဘူး။ ဒါနဲ့agent က ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားမယ် ထင်တယ်။ အရင် ဖုန်းဆက်ကြည့်ပြီးမှ သွားတာ ပိုအဆင်ပြေမယ်။
Monday, August 23, 2010 9:48:00 AM